Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း)
Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း ဆိုတာ အစာခြေဖြတ်ရေးလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် မှာဖြစ်နှိင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ယိုစိမ့်သောသွေးကို စွန့်ပစ် လိုက်သော ဝမ်းထဲမှာသော်လည်းကောင်း၊ အန်ထုတ်လိုက်သော အစာဟောင်းများထဲမှာလည်းကောင်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သွေးပါသော ဝမ်းဟာ အမဲရောင် သို့မဟုတ် ကတ္တရာစေးပုံစံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သို့သော် သွေးယိုစိမ့်တိုင်း ထိုသို့တွေ့ရမည် မဟုတ်ပါ။ သွေးယိုစိမ့်မှု အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာမှာ အသေးစား မှ ပြင်းထန်/အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ထိ ရှိတတ်ပါတယ်။
အစာအိမ်နဲ့ အူမကြီးမှာ သွေးယိုစိမ့်တယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းရင်းကိုရှာရလွယ်သော်လည်း အူသိမ်မှာဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ အကြောင်းရင်းကိုရှာရခက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် နောက်ဆုံးပေါ် Imaging နည်းပညာတွေသုံးပြီး ရောဂါရဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုသိနိုင်သလို၊ ခန္တာကိုယ်ကို အနည်းငယ် ထိုးဖောက်သော နည်းစနစ်များသုံးကာ ကုသနိုင်ပါတယ်။
Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဒီနေရာမှာ အူလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အစာဟောင်းအိမ် သွေးယိုစိမ့်နေပြီလားလို့ သံသယ ဖြစ်စရာ၊ သတိထားစရာ လက္ခဏာလေးတွေရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ဝမ်းဟာ အနက်ရောင်ဖြစ်မယ်ကတ္ဆရာလိုစေးကပ်နေမယ်၊ ဆိုရင် အစာအိမ် သို့မဟုတ် အပေါ်ပိုင်း အူလမ်းကြောင်း တစ်နေရာရာမှာ သွေးယိုစိမ့်နေနိုင်ပါတယ်။ အစာဟောင်းအိမ်မှာ သွေးယိုစိမ့်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာ ဝမ်းထဲ သွေးပါ တာ သို့မဟုတ် အိမ်သာသုံးစက္ကူ သုံးလိုက်ရင် စက္ကူမှာ သွေး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုသွေးဟာ အနီရောင်ရဲရဲဖြစ်နေပါမယ်။ အန်တဲ့အထဲ သွေးပါခြင်းဟာလဲ နောက်ထပ် လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်သလဲ?
အထက်ဖေါ်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာ ထဲကတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ကော်ဖီရောင်လို အညိုရောင်တွေ အန်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းသွားပြသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတတ်ပါတယ်။ အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လျှင်လည်း ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနှင့် အခြားခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြူဖြော့လာခြင်း၊
စတဲ့ လက္ခဏာများဟာလဲ ပြင်းထန် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွေးယိုစိမ့်သောနေရာပေါ်မူတည်ပြီး အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်စေသောအေကြာင်းအရင်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အပေါ်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်း အကြောင်းအရင်းများ ထဲမှာဆိုရင် အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် နံရံ အနာဖြစ်ခြင်းဟာ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ H.pylori ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုး ဟာထိုသို့အနာဖြစ်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အစာပြွန်တစ်လျှောက် သွေးပြန်ကြောများ ဖေါင်းကြွပြီး ပေါက်ပြဲခြင်းကြောင့်လည်း သွေးယိုစိမ့်တတ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေကို ဆေးပညာအရ Mallory-Weiss syndrome လို့ခေါ်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်း အကြောင်းအရင်းများ ထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းဟာ အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးရောင်ရမ်းစေတဲ့ အချက်များမှာ အူမကြီး ပိုးဝင်ခြင်း၊ အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ကပ်ပါးပိုးဝင်ခြင်း၊ Cohn’ disease ခေါ် အူမကြီး အနာများဖြစ်၍ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အူမကြီးသို့ သွေးစီးဆင်းမှုနည်းခြင်း၊ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခြင်းဟာလည်း အောက်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်း နှင့် အစာဟောင်းအိမ် သွေးယိုစိမ့်ခြင်း ရဲ့အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းဆိုတာ အစာဟောင်းအိမ်နဲ့ စအိုအူနံရံမှာ ဖေါင်းကြွနေတဲ့ သွေးပြန်ကြောများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဖေါင်းကြွနေတဲ့ သွေးပြန်ကြောများ ပေါက်ပြီး သွေးယိုစိမ့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စအိုကွဲခြင်းကြောင့်လည်း အောက်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ စမြင်းတုံးများသွားခြင်း တို့ကြောင့် စအိုကွဲတတ်ပါတယ်။
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများ မရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာ မှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အောက်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ သင့်ဆရာဝန်က သင့်အား ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာများနဲ့ ရောဂါရာဇဝင်ကို မေးမြန်းခြင်းနဲ့ အစပြုပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် ဝမ်းထဲသွေးပါမပါ နှင့် အခြားသော tests များ စစ်ဆေးရန် ဝမ်းနမူနာကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ သွေးအားနည်းခြင်း လက္ခဏာများကိုလည်းရှာဖွေ ပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်း ဇစ်မြစ်ကိုရှာဖွေဖို့ Endoscopy ဆိုတဲ့စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ Endoscopy ဆိုတာ ပြော့ပြောင်းသော ပြွှန်တစ်ခုဧ။်ထိပ်တွင် camera ငယ်လေးတပ်ကာ အစာပြွန်တစ်လျှောက်ထည့်သွင်း၍ ဆရာဝန်မှ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို Camera ငယ်ဖြင့် အစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် မည်သည့်နေရာတွင်သွေးယိုစိမ့်နေသည်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ သိုသော် Endoscopy သည် အပေါ်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်းကိုသာမြင်နိုင်ပါတယ်။ Endoscopy မှာမမြင်နိုင်တဲ့ သွေးယိုစိမ့်မှုမျိုးဆိုရင် Enteroscopy ပြုလုပ်ရန် ဆရာဝန်က အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ Enteroscopy ဆိုတာ endoscopy နည်းတူပါပဲ။ သို့သော်သူ့မှာ balloon သောကြာင့် ထို balloon ကို လေဖေါင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် အူလမ်းကြောင်း ကိုလိုသလိုချဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းအူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆိုရင်တော့ colonoscopy ဆိုတဲ့ စစ်ဆေးမှု ကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Colonoscopy ဆိုတာကတော့ထိပ်တွင် camera တပ်ဆင်ထားသော သေးငယ်ပြော့ပြောင်းတဲ့ ပြွန်လေးကို စအိုမှတစ်ဆင့် အစာဟောင်းအိမ် ထဲသို့ ထည့်ပြီး အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် သွေးယိုစိမ့်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါက biopsy အသားစအနည်းငယ်ယူပြီး စစ်ဆေးမှုများလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ ဓါတ်သတ္တုတစ်မျိုးကို သွေးပြန်ကြောမှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းပြီး ဓါတ်မှန်ကိုအသုံးပြုကာ သွေးယိုစိမ့်တဲ့နေရာကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းများနဲ့ မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က Pill Cam Test ဆိုတာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Pill Cam Test ဆိုတာကတော့ Camera သေးသေးပါတဲ့ ဆေးလုံးလေးကိုမျိုချရပြီး ထို Camera ကရိုက်လိုက်တဲ့ပုံများ ကတစ်ဆင့် မည်သည့်နေရာတွင် သွေးယိုစိမ့်နေသည်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Gastrointestinal Bleeding (အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Endoscopy ဟာရောဂါဇစ်မြစ်ရှာဖွေရေးတွက်ပါမက ကုသရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းထဲ ပိုက်ပျော့ထည့်ရာတွင် camera သာမက သွေးတိတ်စေတဲ့ ဆေးကိုပါ တစ်ပါတည်း ထည့်ပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးယိုစိမ့်နေသော သွေးကြောကို ညှပ်ရန် Clips ကိုလည်း တစ်ပါတည်းထည့်သွင်း ကုသနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သွေးယိုစိမ့်ရခြင်းဟာ လိပ်ခေါင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ခဲ့ရင် မိမိဘာသာမိမိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်မှဆေးများဖြင့် သက်သာမည်မဟုတ်ပါ။ ဆရာဝန်က လိပ်ခေါင်းကို ကျုံ့စေရန် အပူဓါတ် နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ ကိုအသုံးပြုကုသပါလိမ့်မည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစိမ့်မှု ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။။
Gastrointestinal bleeding. https://www.healthline.com/symptom/gastrointestinal-bleeding. Accessed October 25, 2017
Gastrointestinal bleeding. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gastrointestinal-bleeding/basics/definition/con-20035736. Accessed October 25, 2017